Nnọọ na People-Powered Money
Paxful na agbanwe ụwa nke ego. Naanị afọ ise, anyị abụrụla otu n’ime Isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ ahịa bitcoinọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na'eji. Anyị ka na ebido.
Paxful malitere site na ozi dị mfe: iji nye ijeri anọ echefuru echefu na enweghị ụgwọ ike, n'ihi ya, ha na achịkwa ego ha n'ụzọ ha na enwetụbeghị mbụ.
Onye kwabatara si na Egypt azụlitere n'obi New York, Ray mgbe ọ bụla ọ na achọ inyere ndị ọzọ aka. Ọ rọrọ nrọ ụwa ebe onye ọ bụla nwere ike inweta ego yana echiche ahụ gosipụtara dị ka Paxful.
Na-etolite na Estonia, Artur mụtara otú teknụzụ nwere ike isi gbanwee ụwa. N'ịchọ ime ihe dị iche, ọ kwagara New York iji mezuo nrọ ya nke iwetara onye ọ bụla nọ n'ụwa nnwere onwe ego.
Anyị na ebi ma na arụ ọrụ site na ụkpụrụ atọ dị mfe iji duzie anyị n'ọchịchọ nnukwu ihe anyị.
Na Paxful, anyị na eji ike karịrị ike mmadụ iji mechaa ọrụ ahụ. Anyị na arụ ọrụ oge niile n'elekere iji nye ndị ọrụ anyị ihe ha rọrọ na nrọ. Anyị na eme ka ihe na agaghị ekwe omume bụrụ eziokwu iji gbanwee ndụ nke ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa.
Wuo maka ndị Mmadụ
Mgbe anyị na-eme mkpebi na Paxful, anyị na echebara ndị mmadụ echiche — ọ bụghị uru. Anyị na aga ebe ndị ọzọ ụwa leghaara ma chefuo. Anyị na enyere ezinụlọ aka ka ha na eme nke ọma, na ewu ụlọ akwụkwọ, ma na enyere ndị ọrụ anyị aka ka ha bụrụ ndị isi ha.
Jikọọ na Okporo uzọ
Anyị na ege ndị obodo anyị ntị 24/7 na Paxful. Anyị anọghị na skyscrapers nwere "uwe" - anyị na ndị mmadụ nọ n'okporo ámá. Anyị na ndị ọrụ anyị na ekwurịta okwu mgbe niile, na arịọ ha maka nzaghachi ha, na ịmepụta ihe ka mma.
Paxful na agbanwe ụzọ ụwa si ebugharị ego ma na anabata crypto na ekwe ka onye ọ bụla n'enyefe ego, ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Enweghị akaụntụ ụlọ akụ? Nsogbu adịghị. Anyị nwere usoro ọkwụkwụụgwọ karịrị 300 ịhọrọ site, na eme ka ọ dịrị gị mfe ịbuga ego gị n'ụzọ masịrị gị.
Nkà na ụzụ ndị mmadụ
Paxful bụ nnọọ Isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ, nke pụtara na ndị ọrụ anyị na ndị ezigbo mmadụ na azụkọ ahịa etu e siri chọọ iji bitcoin mee ihe.
Akpa Ego Crypto N'efu
A pụrụ ịdabere na ya, dị mfe iji, ọ naghịkwa efu gị ego ọ bụla. Akpa ego dijitalụ anyị na enye onye ọ bụla ebe nchekwa maka akụ ha n'agbanyeghị onye ị bụ ma ọ bụ ebe ị si.
Nchedo na nchekwa bu ihe kacha mkpa abịa na ego gi. A na echekwa azụmaahịa niile dị na Paxful site na ego edebere ruo na azụchaa ahịa dị nchebe iji chekwaa udo nke uche.
Na Paxful, anyị kwenyere na Bitcoin bụ ọdịnihu na ụgbọ maka mgbanwe. Built with Bitcoin bụ ebumnuche anyị iji nye ohere, meziwanye ndụ, ma mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma maka obodo ndị kachasị mkpa ya, na eji Bitcoin.
Ihe mgbaruoso ahụ? Iji wuo ụlọ akwụkwọ 100, ụlọ ọrụ mmiri, na ndị na emepụta ihe na akpata ego kpamkpam Bitcoin. Ugbu a, anyị na ewu ụlọ akwụkwọ nke anọ anyị ma nwee naanị 96 ndị ọzọ!
Built with Bitcoin nyekwara aka na enyemaka COVID-19 na Africa-site na onyinye mmesapụ aka nke ndị ọrụ na ndị enyi anyị nwere ike ịnye nri, ndị na edozi aka, na ngwa nchekwa ndị ọzọ nye ndị nọ na mkpa.
Sonyere anyị! Ka anyi gbanwe uwa onu.
Ndị otu anyị
Ulọ ọrụ na gburugburu ụwa
Ndị oru choro ime ka ụwa buru ebe ka nma
Asụsụ a na asụ n'ọfịs ụwa anyị
Ebumnuche iji wuo ụwa nke nwere ohere ịnweta ego maka mmadụ niile
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu nkwado ma ọ bụ chọọ ịnye anyị nzaghachi banyere otu anyị nwere ike isi melite ngwaahịa anyị, ọ ga-amasị anyị ịnụkwu banyere ya
. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ Paxful banyere ajụjụ ndị metụtara azụmahịa ndị ọzọ, anyị dịkwa site na ọwa ndị ọzọ.
Nta akụkọ na Ahia
Nyere aka gbasaa ozi banyere Paxful site na nta akụkọ na azụmaahịa. Kpọtụrụ anyị maka ịjụ ajụjụ na [email protected] .‎
Programụ Nchoputa Nsogbu na enye gị ohere ị nweta ụgwọ ọrụ maka ịmata ihe metụtara ọrụaka. Kpesa ha na [email protected]. Ozi ndị ọzọ ebe a.‎
Iji debanye aha akaụntụ arụkọrọmaka azụmaahịa na Paxful, ị nwere ike izipu imeelu na [email protected]. Ozi ndi ozo ebe a.‎
Azụmaahịa na Mmekọrịta
Ijụ banyere ịbụ onyeòtù. Mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmekọrịta anyị site na izigara imeelu na azụmaahị[email protected].‎
Ka anyị wulite ọdịnihu ọnụ
Sonya na Ngagharị Anyị
Mepụta akaụntụ Paxful nke gị ma were onwe gị banye ụwa nke crypto.
Ọrụ na Paxful Mepee akaụntụ gị